Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku qaadanayno.. (Musiibadii Hillsborough & Goolkii uu CR7 ku qaatay Puskás Award?) – Gool FM
Kooxda Liverpool oo u gudubtay wareega 16-ka & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray Champions League… SAWIRRO
Shakhtar Donetsk oo markii labaad guul ka gaartay kooxda Real Madrid … +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Liverpool iyo Ajax ee Champions League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Real Madrid ee Champions League oo la shaaciyey
UEFA oo ku dhawaaqday 50 ciyaaryahan ee u sharraxan Kooxda Sanadka… (Yaa kaga jira Kooxdaada?)
Tababare Ronald Koeman oo shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona uga qeyb galaya kulanka Ferencvaros… (Messi oo Maqan & Lenglet oo ku jira)
Jack Grealish oo ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo tirakoob xiiso badan
(Yurub) 15 Abriil 2019. Aqristayaasheenna sharafta leh ku soo dhowaada xubinta Maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta.
Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaan maanta ku soo qaadanaynayaa musiibadii Hillsborough iyo goolkii uu Cristiano Ronaldo ku qaatay abaal-marinta Puskás ee dhashay maanta oo kale.
30 sano ka hor maanta oo kale ayey ku beegnayd markii ay dhacday musiibadii Hillsborough, taasoo ay noloshooda ku waayeen 96 ka mid ahaa taageerayaasha kooxda Liverpool kulan kubadda cagta ah.
Musiibadan ayaa dhacday kaddib markii ay taageerayaashu isbuurteen ama ay is ciriiriyeen intii lagu guda jiray kulan ka tirsanaa afar dhammaadka ama Semi-finalka FA Cup-ka oo u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Nottingham Forest, kaasoo ka dhacay garoonka Hillsborough, Magaalada Sheffield ee dalka England.
Waxa ay musiibadan dhacday maanta oo kale 15-kii bishii April sanadkii 1989-kii, waxaana musiibadaas ku geeriyooday 96 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 766 qof oo kale.
Dhacdadaan waxaa loo xusuusan doonaa inay tahay middii ugu xumayd taariikhda isboortiga Waddanka Britain.
Kulankii xalay dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa loo sameeyey dadkii ku waxyeeloobay musiibadan daqiiqad aamusnaan ah.
Dhinaca kale maanta oo kale 15-ka bishii April sanadkii 2009, Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey mid ka mid ah goolashiisa ugu fiican kaddib markii uu isagoo ka tirsan Manchester United ugu shubay kooxda FC Porto kubbad uu ka tuuray meel goolka u jirta 40 yaardi.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ayaa goolkaas ku qaatay abaal-marinta Puskás Award ee goolkii ugu fiicnaa sanadkaas.
Alisson Becker oo RIKOODH muhiim ah ku garaacay dhamaan goolhayayaasha Yurub xilli ciyaareedkan